Dhavhidhi Akanga Asingatyi | Dzidzisai Vana Venyu
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Lovari Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pennsylvania German Piaroa Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Unoitei paunenge uchitya?— Zvichida unoenda kuna amai nababa vako kuti vakubatsire. Asi pane mumwezve anogonawo kukubatsira. Ane simba kupfuura chero ani zvake. Unoziva here kuti ndiani?— NdiJehovha Mwari. Ngatitaurei nezvemumwe mukomana ari muBhaibheri anonzi Dhavhidhi. Aiziva kuti Jehovha aizomubatsira nguva dzose, saka akanga asingatyi.
Kubva Dhavhidhi achiri mucheche, vabereki vake vakamudzidzisa kuda Jehovha. Izvi zvakabatsira Dhavhidhi kuti asatya kunyange zvinhu zvinotyisa pazvakaitika kwaari. Aiziva kuti Jehovha aiva Shamwari yake uye kuti aizomubatsira. Pane imwe nguva, Dhavhidhi paaifudza makwai, shumba hombe yakauya ikabata gwai nemuromo wayo! Unoziva here zvakaitwa naDhavhidhi? Akadzingirira shumba yacho uye kunenge kuti akaiuraya nemaoko ake! Uye mhuka inonzi bheya payakarwisa makwai acho, Dhavhidhi akaiurayawo! Unofunga kuti ndiani akabatsira Dhavhidhi?— NdiJehovha.
Paiva neimwe nguva Dhavhidhi paakaratidza kushinga zvikuru. VaIsraeri vairwa nevanhu vainzi vaFiristiya. Mumwe musoja wechiFiristiya aiva zirume rakareba zvikuru! Zita rake ainzi Goriyati. Zirume iri raiseka masoja echiIsraeri uyewo Jehovha. Goriyati akaudza masoja echiIsraeri kuti kana paine akashinga auye arwe naye. Asi vaIsraeri vose vakanga vachitya zvikuru kuti varwe naye. Dhavhidhi paakanzwa nezvazvo, akaudza Goriyati kuti: ‘Ndicharwa newe! Jehovha achandibatsira, uye ndichakukunda!’ Unofunga kuti Dhavhidhi ainge akashinga here?— Ainge akashinga zvikuru. Unoda kuziva zvakazoitika here?
Dhavhidhi akatora chipfuramabwe chake nematombo 5 anotsvedzerera, ndokuenda kunorwa nezirume racho. Goriyati paakaona kuti Dhavhidhi aiva mudiki chaizvo, akamuseka. Asi Dhavhidhi akamuudza kuti: ‘Unouya kwandiri nebakatwa, asi ini ndinouya kwauri nezita raJehovha!’ Akabva aisa dombo muchipfuramabwe chake, akamhanya achienda kuna Goriyati, ndokurikanda rakananga kwaari. Dombo racho rakarova Goriyati pahuma chaipo! Zirume racho rakawira pasi ndokufa! VaFiristiya vakatya chaizvo zvokuti vose vakatiza. Mukomana mudiki akaita saDhavhidhi akakwanisa sei kukunda zirume rakakura?— Jehovha akamubatsira, uye Jehovha aiva nesimba zvikuru kupfuura zirume iroro!
Dhavhidhi akanga asingatyi nokuti aiziva kuti Jehovha aizomubatsira
Ungadzidzei panyaya yaDhavhidhi?— Jehovha ane simba zvikuru kupfuura chero ani zvake. Uye iShamwari yako. Saka pauchanzwa kutya munguva inotevera, yeuka kuti Jehovha anogona kukubatsira kuti ushinge!
Pisarema 56:3, 4
1 Samueri 17:20-54
Dhavhidhi akaitei shumba nebheya pazvakarwisa makwai ake?
Goriyati paakaseka Jehovha, Dhavhidhi akatii kwaari?
Dhavhidhi akakurira sei Goriyati?
Nei Dhavhidhi asina kutya shumba, bheya uye zirume rakakura?
Ungadzidzei panyaya yaDhavhidhi?